बलात्कार अब झन् बढ्छन « Jana Aastha News Online
| Sat May 28 2022
बलात्कार अब झन् बढ्छन
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७५, मंगलवार ११:२१
झण्डै पाँच वर्ष जिल्लाका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत मेनुका गौतम कोइरालाले डेढ वर्षको बच्चालाई नजिकै राखेर आफ्नै ओछ्यानमाथि पासो लगाई आत्महत्या गरिन् ।
श्रीमान् माल्टामा कार्यरत छन् । उनी पनि ८ दिनपछि उतै जाँदै थिइन् । डेढ वर्षको कलिलो छोरालाई छाडेर किन आत्महत्याको बाटो रोजिन् अझै खुल्न सकेको छैन । भदौ १ गते देखि कार्यान्वयन हुने नयाँ कानुनले जबर्जस्ती करणीका घटनामा वृद्धि गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
श्रीमान्लाई वैवाहिक बलात्कारमा उजुर दिने श्रीमतीहरूको संख्या बढ्दो छ । हाडनाता करणीमा हद म्याद नहुने, बलात्कारमा एक वर्षसम्म हद म्याद हुने भएकोले पनि यस्ता प्रकृतिका घटना बढ्नेछन् । सहमति हुँदासम्म सम्बन्धमा रहने र दरार आउनेबित्तिकै बलात्कार हुने भएपछि प्रहरीसमेत अनुसन्धानमा आजित हुन थालेको छ । विद्यालय गएका बालबालिका प्रेमीसँग भाग्दै छन् । २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न पाइँदैन । १४ वर्षमा प्रेम गरेर भाग्ने बालबालिकाको समूह थपिँदै गएको छ । बाबुहरू छोरी अपहरणको मुद्दा लिएर प्रहरीकोमा धाएको धायै छन् ।
९ वर्षीया बालिका फुपूलाई बलात्कार गरेको देखेपछि भाग्दै गर्दा बलात्कृत हुन्छिन् र मारिन्छिन् । अपराधले सीमा नाघेको छ । राजधानीनजिकको काभ्रेमा अघिल्लो वर्ष ज्यानसम्बन्धी ७६ वटा घटना भएकोमा बढेर ९० पुगेको छ । प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज खड्काका अनुसार आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या १ सय ३६ छ । महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी घटना ४५ वटाबाट ६९ पुगेको छ भने सवारीसम्बन्धी घटना ३२ बाट ४८ पुगेको छ ।
– मोतीराम तिमल्सिना
राष्ट्रपतिमा अब को रोजिएलान् ?
राजाका सैनिक सचिवको यो रोदन
मोदीको कार्यक्रममा ८३१ जनालाई प्रवेश निषेध
पुरुषचाहिँ पीडित हुन्नन् र पत्नीबाट ?
जब निभ्दै जान थाल्यो आशाको दियो
निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई यो निवेदन
पाँच वर्षमै किन गयो रविन्द्र मिश्रको पार्टीमा पहिरो ?
निर्वाचन अधिकृतको अभिव्यक्ति, पत्रकारलाई भत्भती
कतै हाम्रो आँशुले त पोलेन कमरेड !
घरमा मारेर सडकमा श्रीमती पोल्ने डिआईजीको मुद्दा उल्टियो, पूर्ववत जन्मकैदको…
नाम जुधेपछि सीईओ भुवन दाहालझैँ अप्ठेरोमा परे पत्रकार मनोज पाण्डे…